Tanànan'ny taonjato faha-101: fananganana fotodrafitrasa XNUMX - Geofumadas
Jolay, 2020 Engineering, maro
Ilaina ankehitriny ny fotodrafitrasa. Matetika isika dia mieritreritra tanàna marani-tsaina na nomerika amin'ny sehatry ny tanàna lehibe misy mponina marobe ary hetsika maro mifandraika amin'ny tanàna lehibe. Na izany aza, mila fotodrafitrasa ihany koa ny toerana kely. Zava-misy fa tsy ny sisintany politika rehetra dia mifarana amin'ny tsipika eo an-toerana, fa manitatra ihany koa ny serivisy ho an'ny governemantam-paritany, isam-paritra ary ny firenena ary hita tampoka izany: la Ny fotodrafitrasa dia mpanitsakitsaka mazava ny fetra, ilaina.
Diso fotsiny ilay hevitra hoe afaka mahita toerana marani-tsaina isika ao anatin'ny habaka jeografika kely kokoa fotsiny. Tsy izany ihany fa ny lalàna mifandraika amin'ny fananganana fitantanana fampahalalana, fomba fanao amin'ny fananganana, fampiharana ny vokatra, ny fiarovana ny olona sy ny fanamboarany dia matetika mihoatra ny toerana kely sy lehibe koa. Misy ny siny tavoahangy izay tiana hampiasaina ny GIS sy ny BIM.
Ny teknolojia dia efa nanitatra lavitra ny sisintany sisintany, saingy ny politika sy ny fitantanana GIS sy ny fitantanana dia tsy nahavita nahatratra ny filaharany fampiasa andrefesana ambony indrindra.
Nantsoinay hoe sakana mitsivalana na fantson-fatana izany. Ny fangatahana GIS sy BIM voalohany indrindra dia niorim-paka lalina tany amin'ny faritra misy azy ireo, farafaharatsiny ratsy ireo izay nanana ny angom-baovao no nibaiko ny tetik'asa ary tsy nitety an'izao tontolo izao lavitra noho ny tahotra sao ho voafehy. Soa ihany fa niova be io - fa tsy noho ny antony lojika indrindra mety hieritreretanao azy. Mifanohitra amin'ny eritreritra ny hahitan'ny olona ireo sakana ifanakalozana GIS sy BIM eo an-toerana ary hisafidy ny hizara izy ireo, dia misy antony hafa mitondra fanovana. Anisan'izany ireto:
Ny fifindrana amin'ny rindrambaiko miorina amin'ny rahona sy ny fampiharana dia niteraka "fahamoran'ny fampiasana" izay mibontsina amin'ny fetra ary manome fahalalana ho an'ny tsirairay ny zavatra azo ampiasaina. Vitsy kokoa ny rakitra tahirin-tsasatra izay hajaina mafy, ary apetraka tsara ny rindranasa informatika hanamboarana sy hampifandray data. Izany dia nitarika fisainana bebe kokoa, ary ny fivoaran'ny tetikasa iraisana dia lasa matanjaka kokoa ary mety hatanjaka kokoa.
Ny fiovana amin'ny rindrambaiko sy rindranasa mifototra amin'ny rahona dia nanjary “fanamorana ny fampiasana” izay tafintohina amin'ny fetra ary manome fahitana an'izay rehetra azo ampiasaina ny tsirairay. Betsaka kokoa ireo magazay tahiry izay voahazona tsara, ary ny fikirakirana ny kaonty dia manatsara ny fananganana sy fampifandraisana angona. Io indray dia nanjary fisainana misimisy kokoa, ary ny fampandrosoana ireo tetik'asa ifampizarana dia nanjary matanjaka kokoa ary azo antoka kokoa.
Ny fivezivezena dia namorona fifandraisana eo amin'ny fampiharana an-tsaha sy ny birao. Tampoka teo dia afaka mizara angon-drakitra ny olona iray amin'ny latitude 60 degre ary mifandray amin'ireo rafi-tahiry avo lenta amin'ny olona iray hafa amin'ny latitude 10 degre, tsy misy olana. Ny data finday dia mazàna miova sy manodidina ny sakana ataon'ny olona, ​​manohana ny ekipa ary tambajotra malalaka kokoa.
Azo iadian-kevitra fa ireo tetikasan'ny fotodrafitrasa tany am-boalohany mampiasa BIM sy GIS dia niditra an-tsehatra loatra tamin'ny fampitahana ny teknolojia iray hafa. Ireo karazana tohan-kevitra momba ny fomba teo aloha teo amin'ny sehatry ny birao dia nanakenda ny fiainan'ireo mpandinika sy mpamorona mpamorona, ireo izay mitady hanaraka fironana sy fomba vaovao ary matetika no antsoina hoe mpitarika tetikasa manova zava-baovao. Ny tena izy dia tsy miorina amin'ny GIS sy BIM fotsiny ny fotodrafitrasa ankehitriny, fa eo koa ny fanovana teknolojia hafa. Ny tanjona anio dia ny hampiditra azy ireo, mitady hahafantatra hoe aiza sy amin'ny fomba ahoana no hampiasana azy ireo ary raha manome fampisehoana sy fahombiazana bebe kokoa izy ireo. Ireo no antony sasany mahatonga ny teknolojia GIS sy BIM hahatratra ny ambaratonga avo kokoa amin'ny fahombiazana ankehitriny.
Azo ambara fa ny tetik'asa fotodrafitrasa voalohany mampiasa BIM sy GIS dia voarohirohy amin'ny fampitahàna ny teknolojia iray amin'ny iray hafa. Ireo karazana tohan-kevitra momba ny fomba teo amin'ny sehatra desktop teo aloha dia nanelingelina ny fiainan'ireo mpikirakira sy mpanao famoronana, ireo izay mikatsaka ny fironana sy fomba fiasa vaovao, ary matetika no antsoina hoe mpitarika tetikasa izay manova fanavaozana. Ny zava-misy dia ny fotodrafitrasa ankehitriny tsy miankina amin'ny GIS sy BIM ihany, fa ny fiovana ara-teknika sy fanavaozana hafa koa mitranga. Ny tanjona dia ny hampiditra azy ireo, mitady ny hamantatra hoe aiza sy ny fomba mety hampiasana azy ireo ary raha manome fampisehoana sy fahombiazana lehibe kokoa izy ireo. Ireo no antony sasany mahatonga ny teknolojia GIS sy BIM amin'izao fotoana izao hahatratra fahombiazana avo kokoa.
Eo amin'ny faravodilanitra dia misy tontolon'ny faharanitan-tsaina (AI) miandry izay mikendry ny hampiditra ny GIS sy ny BIM amin'ny fifangaroana ho an'ireo mpamorona fotodrafitrasa, mpanangana, mpandraharaha ary fikambanana mitady hitahiry fotodrafitrasa. Indraindray dia toa voatosika ho any amin'ireo fifanakalozan-kevitra ireo ny AI ka toa majika sy tonony no majika. Na izany aza, miresaka amin'ireo matihanina AI dia matetika ianao no maheno fa ny fiantraikan'ny AI dia miompana amin'ny fahatakarana ny tsy fahazoana antoka.
AI dia afaka manome vahaolana, ary ny tanjony dia matetika voatonona amin'ny resaka fampivoarana fotodrafitrasa: fanatsarana ny fahombiazany. Na izany aza, ny tanjon'izy ireo dia ny hampihenana ny tsy fahazoana antoka ary hampiakatra ny zava-bita.
Tahaka ny nanampian'ny GPS ny fampiasana ny toerana amin'ny fampiharana marobe, tsy afaka milaza aminao koa izy, ohatra, fa ny lalana alehanao dia hahita anao tonga any amin'ny toerana halehanao ao anatin'ny iray minitra. Betsaka ny tsy fahazoana antoka amin'ny fampiharana GPS, na dia fantatsika aza ny misy antsika. Toy izany koa, amin'ny lafiny tranokala fananganana, ny AI dia hahita ny fahataran'ny fitaovana, ny hetsika fitokonana na ny toetr'andro ratsy. Amin'ny fampiasana ny fiovan'ny toetr'andro, iza no mahalala raha hiova ny fisian'ny rano na tsia, ny rivotra ho an'ny famokaran'ny rivotra dia hitombo na hihena na raha ny famokarana onja aza no mety ho famokarana herinaratra be mpampiasa indrindra na dia any amin'ny farihy eo an-toerana aza.
Ny tiana holazaina dia - ny GIS sy ny BIM dia nitombo tsy tapaka nandritra ny taona maro. Nandritra io fotoana io dia niova ny ankamaroan'ny zavatra fantatsika sy nahazatra antsika ary hitohy hiova isika. Ny tanàn-dehibe sy ny fotodrafitrasa nomerika dia miditra amina dingana iray izay ahazoana fahalalana bebe kokoa. Ny tambajotran'ireo mpandray anjara ao anatin'ny fivoaran'ny fotodrafitrasa sy ny asa dia mivelatra miaraka amin'izay. Mila mijery fomba fijery mitsikera ny tsy fahazoana antoka amin'ny asa fandrefesana fotodrafitrasa isika, manombatombana amin'ny ankapobeny, ary manomboka mamolavola fitaovana izay tsy mamariparitra sy mandinika fotsiny izay ilaintsika amin'ny fanatanterahana, fa koa izay azo takarina amin'ny alàlan'ny tsy fantatray ny momba ny tetikasa iray. Ity dia zavatra iray toa ny fahatakarana ny anjara asan'ny data spatial vs. Aerospace.
Na izany na tsy izany dia tadidio fa ny tanàna mahira-tsaina sy ny kambana nomerika dia tsy natao ho an'ny zava-bita lehibe any an-tanàna ihany, fa ho an'ireo izay any amin'ny toerana kely kokoa ihany koa, toa ireo toerana niavian'ny sakafo sy toerana anaovan'ny fiaran-dalamby. fiaramanidina sy fiara. Mahaliana ny mahafantatra hoe firy ireo matihanina amin'ny fotodrafitrasa ankehitriny miaina ivelan'ny tanàna lehibe, sa tsy izany?
Jeff Thurston dia kanadianina GIS kanadianina ary tonian-dahatsoratry ny famoahana geospatial any Eropa. Any Berlin, Alemana no misy azy.
Previous Post«Previous Ny geomatics sy ny siansa momba ny tany tamin'ny 2050
Next Post GRAPHISOFT dia manitatra ny BIMcloud ho serivisy ho an'ny fisian'izao tontolo izaomanaraka »